Bogga ugu weyn 15 Madal ee Ganacsi Hantida Online ee ugu Fiican Sanadka 2022
Markay timaaddo maalgelinta, qaar baa diyaar u ah inay halkaas ku laalaadaan muddada dheer. Waxay la mid yihiin buur aan la dhaqaajin karin adduunka maalgashiga.
Markaa waxaa jira kuwa kale ee ku nool xiisaha ay u qabaan buuqa maalinlaha ah. Waxay jecel yihiin iibsashada iyo iibinta si joogto ah, iyagoo raadinaya heshiiska xiga ee ugu fiican suuqa. Tani waa qayb ka baahi badan oo ka xiiso badan dunida maalgashiga laakiin si uun, waxay ka dhigaan inay iyaga u shaqeyso. Nimankani waa kuwa ganacsatada saamiyada.
Maqaalkan, waxaan ku qori doonnaa aaladaha ganacsiga saamiyada ugu wanaagsan ee khadka tooska ah ee aad u isticmaali karto si aan kala go 'lahayn.
Kahor intaanan sii wadin liisaska aaladaha ganacsiga saamiyada ugu fiican, aan sii wadno si aan u qeexno ganacsiga saamiyada.
Waa Maxay Trading Stock?
Waa Maxay Platform Trading Stock?
Sida Loogu Sameeyo Madal Ganacsiyeedka Kaydka ee Ugu Fiican Online
Madasha Ganacsiga Ugu Wanaagsan ee Guud
15 -ka Madal ee Ganacsiga Istaraatiijiga ee ugu Fiican 2022
#9 Ganacsiga 212
# 12 Merill Edge
Ganacsiga saamiyada wuxuu u baahan yahay in si joogto ah loo iibsado oo loo iibiyo saamiyada si waqtiga suuqa. Ganacsatada saamiyada waxay hiigsanayaan inay ka macaashaan dhacdooyinka suuqa ee muddada gaaban iyagoo iibinaya saamiyada faa'ido ama iibsiga kaydka qiimo jaban. Ganacsatada saamiyada qaarkood waa ganacsato maalmeed, taasoo la micno ah inay iibsadaan oo iibiyaan dhowr jeer maalin kasta.
In kasta oo xiisaha loo qabo ganacsiga saamiyada, ganacsatada saamiyadu waa inay qaataan dhowr saacadood oo maalintooda ah iyagoo raacaya isbeddelka suuqa si ay u helaan heshiisyada ugu wanaagsan maalinta oo dhan. Si aad ula socoto xogtan oo dhan, aaladaha ganacsiga saamiyada ee onlaynka ah ayaa loo abuuray ganacsatada saamiyada si ay awood ugu yeeshaan inaysan seegin hal faahfaahin.
Madal ganacsi waa softiweer u saamaxaya maalgashadayaasha iyo ganacsatadu inay dhigtaan meherado oo ay kormeeraan xisaabaadka iyaga oo u maraya dhexdhexaadiye maaliyadeed. Marar badan, suuqyada ganacsiga waxay la imaan doontaa astaamo kale, sida xigashooyinka waqtiga-dhabta ah, aaladaha jaantuska, quudinta wararka, iyo xitaa cilmi-baaris heer sare ah.
Waa qayb software ah oo kuu oggolaanaysa inaad furto, xirto, oo maamusho jagooyinka suuqa adoo adeegsanaya dhexdhexaadiye maaliyadeed sida dillaaliin onlayn ah. Beddelka kaydinta koontada la maalgeliyey iyo/ama samaynta tiro cayiman oo meherad ah bishiiba, aaladaha ganacsiga ee internetka ayaa inta badan lagu bixiyaa bilaash ama lacag la dhimay.
Goobaha ganacsiga ee xariifka ah iyo meheradaha ganacsiga waa labada nooc ee meheradaha ganacsiga. Goobaha ganacsiga, sida magacoodu tilmaamayo, waxay u adeegaan ganacsatada maalinlaha ah iyo maalgashadayaasha tafaariiqda. Waxaa lagu gartaa fududeynta adeegsiga iyo aalado kala duwan oo waxtar u leh waxbarashada maalgashadayaasha iyo cilmi baarista, sida quudinta wararka iyo jaantusyada. Dhanka kale, aaladaha wax -soo -saarka, ayaa ah aalado loo habeeyay oo ay abuureen shirkado walaalo oo waaweyn si ay u daboolaan baahidooda gaarka ah iyo qaababka ganacsi.
Akhri ALSO: Sida Loogu Sameeyo Lacag Suuqa Suuqa 2022: Tilmaan Buuxo.
Qaadashada madal ganacsiga saamiyada ee internetka waxay kuxirantahay nooca maalgashade ama ganacsade aad tahay. Waxa kale oo jira arrimo kale oo la tixgeliyo ka hor intaadan go'aansan madal ganacsi saamiyada.
Hal shay oo muhiim ah oo loo baahan yahay in la tixgeliyo waa khidmadaha madal iyo astaamaha la heli karo. Ganacsatada maalinlaha ah ayaa laga yaabaa inay rabaan inay eegaan madal siisa isticmaaleyaasheeda xigashooyinka heerka 2aad iyo jaantusyada qotada dheer ee suuqa si ay uga caawiyaan go'aan qaadashada. Maalgashadayaasha muddada-dheer waxaa laga yaabaa inay rabaan inay eegaan aaladaha bixiya xeeladaha muddada-dheer.
XIDHIIDHKA: Lindsey Stirling Net Worth 2022 | Taariikh nololeedka, Dakhliga, Xirfadda, Baabuurta
Wax kale oo la tixgeliyo waa shuruudaha madal. Meelaha qaarkood waxay u baahan yihiin ganacsatada maalinlaha ah inay lahaadaan qaddar cayiman, ganacsatada iyo maalgashadayaashu waxay u baahan yihiin inay awoodaan inay la socdaan shuruudaha madal kahor inta aysan go'aansan haddii ay tahay doorashada ugu fiican iyaga.
LA XIDHIIDH BADAN: Maalgashiga Waqtiga-Gaaban ee ugu Fiican 2022-ka
Meesha ugu wanaagsan ee ganacsiga saamiyada ee la heli karo waa TD Ameritrade. TD Ameritrade wuxuu bixiyaa xirfado aan eber lahayn, aalado ganacsi oo la yaab leh, falanqaynta suuqa ka sarreysa, waxbarashada bilowga ah ee hoggaaminaysa warshadaha, iyo taageero macmiil oo la isku hallayn karo. Dhammaan ganacsatada firfircoon, oo ay ku jiraan ganacsatada maalinlaha ah, ganacsatada ikhtiyaariga ah, iyo ganacsatada mustaqbalka, waxay ka faa'iideystaan ​​adeegga sare ee TD Ameritrade. Macaamiisha ayaa laga yaabaa inay koontooyinkooda TD Ameritrade ka galaan Alexa ilaa Facebook, Twitter, Farriimaha Apple, Android Auto, iyo Apple CarPlay, iyagoo ah hoggaamiye teknoloji iyo sirdoon macmal ah (AI). Madalkani wuxuu si aad ah ugu talinayaa bilowgayaasha, ka caawinta inay bartaan xadhkaha ganacsiga iyo maalgashiga.
Aynu eegno qaar ka mid ah aaladaha ganacsiga saamiyada ee ugu sarreeya sannadka 2022.
Lacagtaadu had iyo jeer waxay ku badbaado eToro maxaa yeelay si adag ayaa loo xakameeyaa. Waxaad heli doontaa fasallo hantiyeedyo kala duwan marka aad koonto ka diiwaangeliso eToro. Waxaa jira daraasiin lammaane ganacsi oo forex ah oo laga heli karo goobta, oo leh isku -dhafan wanaagsan oo waaweyn, kuwa aan qaan -gaarin, iyo qalaad. Waxaad sidoo kale ku heli kartaa saamiyada in ka badan 2,400 shirkadood ilaa 17 suuq oo kala duwan. Tani waxay ka kooban tahay is -weydaarsiga saamiyada ee Mareykanka, Boqortooyada Ingiriiska, Jarmalka, Hong Kong, iyo meelo kale. ETF -yada ay taageeraan Vanguard, iShares, iyo SPDR waxaa sidoo kale taageera eToro.
Iyada oo leh aagag ganacsi oo tayo leh, $ 0 guddi oo ku jira saamiyada onlaynka ah, ikhtiyaarrada, iyo xirfadaha ETF, iyo lacago badan oo is -dhaafsi ah, TD Ameritrade wuxuu u adeegaa ganacsatada firfircoon iyo maalgashadayaasha bilowga ah. Madalku wuxuu kaloo bixiyaa astaamo sida cilmi-baaris lacag la'aan ah, aalado ganacsi oo tayo sare leh, taageero macmiil oo wanaagsan, ugu yaraan xisaab la'aan, iyo sidoo kale xulasho ballaaran oo maalgashi.
Kani waa madal -ganacsiyeedka ugu wanaagsan ee maalgashadayaasha doonaya inay dhigaan dhigaal yaryar, waxay kaa caawineysaa inaad hesho ganacsiga ugu fiican ee lacagtaadu iibsan karto. Iyada oo leh deebaaji ugu yar $ 20, waxaad ku bilaabi kartaa meeshan sare ee lagu qiimeeyo dallaalnimada. Tani waa kaamil haddii aad ku cusub tahay ganacsiga internetka ama aadan haysan lacag aad u badan oo aad ku maalgashato.
#4 E * GANACSIGA
E*TRADE ayaa muddo dheer loo arkaa inay tahay mid ka mid ah shirkadaha dilaalnimada ee internetka ee ugu caansan. Ganacsatada firfircoon waxay qaddarin doonaan guddiyada eber ee shirkadda iyo aaladaha ganacsi ee adag, halka maalgashadayaasha cusubi ay ka faa'iideysan doonaan maktabad ballaaran oo ah agabyada tababarka. Mashruucan wuxuu bixiyaa aalado si sahlan loo isticmaali karo, xirfadaha ETF, helitaanka cilmi baaris ballaaran, iyo sidoo kale adeeg macmiil oo weyn.
Libertex waa mid ka mid ah meheradaha ganacsi ee khadka tooska ah ee internetka oo aan wax lacag ah ka qaadin. Intaas waxaa sii dheer, suuqyo badan oo laga heli karo dillaalkan CFD waa komishan la'aan. In kasta oo qaar ka mid ah alaabooyinka maaliyadeed ay leeyihiin guddi aad u yar oo la bixin karo halkii slide, kuwa kale ma sameeyaan (dhif ayay ka sarreeyaan 0.1 boqolkiiba).
XIDHIIDHKA: Sida loo helo shatiga madadaalada 2022 | Hagaha Buuxa
Robinhood wuxuu bixiyaa kayd bilaash ah, ikhtiyaar, ETF, iyo macaamil ganacsi cryptocurrency, iyo sidoo kale ugu yaraan $ 0 koonto. Xisaabaadka maalgelinta ee la canshuurayo oo kaliya ayaa la heli karaa, mana jiraan wax maalgelin ah ama dammaanad ah. Ikhtiyaarka ah in la helo saamiyada jajabka ee saamiyada iyo hawsha maalgelinta ee soo noqnoqota waa laba ka mid ah faa'iidooyinka Robinhood. Sidoo kale waa mid ka mid ah dilaaliinta yar ee u oggolaanaya maalgashadayaasha inay ka ganacsadaan cryptocurrency hadda.
Mid ka mid ah dillaaliyeyaasha ugu sarreeya ee ganacsiga otomaatiga ah waa AvaTrade. Tani waxay sabab u tahay waafaqsanaanta bixiyaha ee MT4 iyo MT5 labadaba. AvaTrade wuu ka sarreeyaa oo wuu ka baxaa isagoo taageeraya ZuluTrade, MQL5, iyo Duplitrade. Aaladahaan iyo aaladaha dhinac saddexaad waxaa ku jira wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u samaysato nidaam ganacsi oo otomaatig ah. AvaTrader waxay taageertaa daraasiin isugeyn lacag ah, indices, bonds, stock, ETFs, iyo cryptocurrencies marka ay timaado suuqyada la taageeray.
#8 Ka ganacsiga
TradeStation waa halbeegga warshadaha ee loogu talagay ganacsatada qallafsan, gardarada ah, laakiin meheradihiisa cusub ee $ 0 waa isku day lagu rafcayo maalgashadayaal caadi ah. Xaqiiqda ah in Tradestation -ka ay u adeegi jirtay kaliya dillaaliin xirfadlayaal ah iyo maareeyayaasha lacagta ayaa ah mid ka mid ah astaamaha ugu soo jiidashada badan. Maalgashadayaasha joogtada ahi waxay hadda heli karaan aaladda octane-ka sare ee shirkadda, gaar ahaan ka dib markii shirkaddu hoos u dhigtay kharashaadkii ganacsiga ilaa $ 0 iyo maalgelinta ugu yar ee bixitaankeeda TS GO oo ah $ 0 sidoo kale.
#9 Ganacsi 212
Ganacsi 212 waa ikhtiyaar wanaagsan oo lagu abuurayo faylalka mudada dheer. Dillaalkan si sahlan loo isticmaali karo wuxuu bixiyaa in ka badan 10,000 oo kayd iyo ETF-yada suuqyada adduunka oo kala duwan. Tani waxay si weyn diiradda u saareysaa saamiyada ku taxan London Stock Exchange (LSE) iyo Suuqa Maalgashiga Beddelka ah (AIM) - ku habboon haddii aad rabto inaad ku maal gasho dhaqaalaha UK guud ahaan. NYSE iyo NASDAQ ee Mareykanka, iyo sidoo kale is -weydaarsiga Jarmalka, Spain, Switzerland, iyo Frankfurt, ayaa ka mid ah suuqyada kale ee laga heli karo Trading 212.
Iyada oo leh naqshad nadiif ah oo loogu talagalay desktop-ka iyo barnaamijyada moobiilka, Webull wuxuu rafcaan ka qaadan doonaa jiilka koowaad ee guur-guurayaasha maal-gashadayaasha caadiga ah, laakiin dilaalnimadu waxay kaloo bixisaa xulasho la yaab leh oo aalado ah oo loogu talagalay ganacsatada gardarrada ah. Si kastaba ha ahaatee, la'aanta helitaanka fasallada hantida yar ee caadiga ah, iyo sidoo kale nuxurkiisa wax -barashada, ayaa laga yaabaa inay mugdi geliso dhallaanka cusub ee runta ah.
ARAG SIDOO KALE: Waa Maxay Maalgelinta Micro Oo Sideen U Bilaabaa?
Skilling waxay hagaajisaa hannaanka iibsashada iyo iibinta aaladaha CFD inta aad socoto. Waxaad ku ganacsan kartaa 800 suuqyada dareeraha ah oo leh barnaamijka ganacsiga Skilling. Boqolaal saamiyo ayaa ku jira, badankood waxaa lagu kala iibsanayaa NYSE iyo NASDAQ. Waxaad kaloo ka ganacsan kartaa saliidda iyo gaaska dabiiciga ah, biraha adag, lacagta, iyo tusmooyinka suuqyada tamarta. Suuq kasta oo maaliyadeed oo Skilling soo bandhigto waxaa lagu ganacsan karaa lacag la'aan komishan iyo fidi-dhuuban.
Madalkan ganacsi wuxuu xiriir la leeyahay Bank of America. Isku-darka xoogga leh ee Merrill Edge ee cilmi-baaris dhammaystiran iyo qiime macquul ah, oo ay ku jiraan ganacsiyo lacag la'aan ah oo aan xad lahayn oo ku saabsan kaydka iyo lacagaha sarrifka, ayaa rafcaan u ah ganacsatada caadiga ah.
IG -gu micnaheedu maahan Instagram (qaarkiin baa ku fikirayay, LOL), waa goob ganacsi oo cajiib u ah ganacsiga forex. Haddii aad rabto inaad ka ganacsato suuqyada FX ee tiriliyanka-doolarka badan laga bilaabo raaxada gurigaaga, IG waa ikhtiyaar wanaagsan. Dillaalkan aadka loo qiimeeyay ayaa hadda ah shirkad si guud looga ganacsado oo bixisa in ka badan 80 lammaane oo lacag ah. Waxaad kala dooran kartaa laba nooc oo koonto inta Forex ganacsiga leh adeeggan. Haddii aad tahay ganacsade caadi ah, koontada CFD ayaa ah ikhtiyaarka ugu fiican adiga. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku ganacsato saamiyo dhexdhexaad ah waxayna meesha ka saartaa baahida loo qabo in la bixiyo guddiyada ganacsiga marka la soo galayo ama laga baxayo suuqa. Halkii, dhammaan khidmadaha ayaa ku jira faafinta. Xitaa koontada fudud ee CFD, faafitaanka ay bixisay IG waa mid aad u tartan badan.
XIDHIIDHKA: Dib u eegida Wealthfront 2022 | Sharci ama khiyaamo, sida ay u shaqeyso
Iyada oo leh $ 0 kharashaadka ganacsiga ee u qalmidda sinnaanta Mareykanka, ugu yaraan $ 0 koonto, lacago badan oo kala duwan oo aan macaamil-wadaag ahayn, iyo ikhtiyaarrada ikhtiyaarrada jaban, Ally Invest waxay u adeegtaa kuwa bilowga ah iyo ganacsatada saamiyada leh ee khibradda leh. Laakiin Ally kaliya kuma tartamayso qiimaha dillaaliyeyaasha waaweyn ee internetka: waxay sidoo kale bixisaa waxyaabo dheeri ah sida ganacsiga FX, maareynta faylalka otomaatiga ah, iyo agabyo maalgelin farsamo oo dhammaystiran.
FXCM, oo la aasaasay 1999, waa dillaaliye sumcad ku leh internetka oo bixiya forex iyo ganacsiga CFD. Kaydadka, biraha adag, tamarta, cryptocurrencies, iyo indices ayaa dhammaantood ku jira qaybtaan. FXCM waxay bixisaa agab waxbarasho oo dhammaystiran iyo ilaha cilmi -baarista.
Waa maxay madasha ganacsiga saamiyada onlaynka ah ee ugu saxsan?
Saddexda ugu sarreeya ee aaladaha ganacsi ee ugu saxsan waa; Daacadnimada, Ganacsiga, iyo TD Ameritrade.
Maxaan ka fiiriyaa madal ganacsi saamiyada?
Waxyaabaha qaarkood in la fiiriyo waa; Isu-dheelitirka koontada waqtiga-dhabta ah, cusboonaysiinta waqtiga-dhabta ah ee awoodda iibsiga, iyo soo-gaadhista xad-dhaafka ah, aaladaha maareynta faylalka, heerka dalabka furan
Ma ka ganacsan karaa dillaal la'aan?
Haa, waxaad ku maalgashan kartaa suuqa saamiga adiga oo aan lahayn wax dillaal ah, sidoo kale waxaad badbaadin kartaa kharashyada qaar sida khidmadaha dilaalnimada.
Sideen ku bilaaba akoon ganacsi?
Kuwa soo socda ayaa ah afarta tallaabo ee la qaadayo si loo bilaabo ganacsiga:
1. Raadi kaydiyaha. Tallaabada ugu horreysa waxay noqon doontaa in la helo bareele internetka ah.
2. Abuur Demat iyo Trading Account.
3. Ku dar lacag koontooyinkaaga Demat iyo Trading adoo galaya.
4. Arag macluumaadka saamiyada oo bilow ganacsiga.
Sideen u doortaa goob ganacsi oo wanaagsan?
Waxyaabaha ay tahay inaad maskaxda ku hayso ka hor intaadan dooran madal ganacsi oo adiga kuugu fiican waa:
1. Isku day inaadan raacin habdhaqanka dadka kale, samee baaritaan kugu filan.
2. Hubi inay leedahay is-dhexgal user-friendly.
3. Hubi haddii ay leedahay shaqooyin aasaasi ah iyo astaamo dheeri ah sidoo kale hubso inay leedahay xasilloonida waxqabadka.
4. Ogow taageerada ay bixiso.
Laga soo bilaabo maal -gashadeedka cusub ilaa qofka cusub ee raadinaya inuu barto xadhkaha, ikhtiyaarada ganacsiga saamiyada ee kor ku xusan ayaa caddaynaya inay ku filan yihiin nooc kasta oo aad ku dhacdo. Sida had iyo jeer, hubso ka hor intaadan dooran madal ganacsi saamiyada, inaad sameyso baaritaan ballaaran. Hubi inaad ogtahay waxa yoolkaaga maalgashi uu yahay ka dibna dooro barxad si ku filan kaaga caawin doonta inaad la kulanto yoolalkaaga ganacsi.
Aasaaska Suuqa Hantida
TD Ameritrade Dib u eegis
11 Meelaha ugu Fiican ee Ganacsiga Online: Oktoobar 2022
Sidee baa ganacsiga baabuurku u shaqeeyaa? Guudmarka, iyo mabaadiida Guud
10ka Apps ee ugu Wanaagsan ee leh Widgets sanadka 2022
10ka Apps ee ugu Wanaagsan Sida credit Grain
Waxaa jira lacago badan oo loo yaqaan 'cryptocurrencies', waxayna noqonayaan kuwo caan ah. Iyagoo aan taageero ka haysan dowlado,...
James Cameron Net Worth 2022 | Taariikh nololeedka, Dakhliga, Xirfadda, Baabuurta
Buugaagta ugu Fiican ee Laga Akhriyo Maalgelinta 2022
Haddii aad rabto inaad dejiso qorshe kaydinta hawlgabka ama aad lacag yar oo dheeri ah ku kasbato, waa…